eBay ikozvino inotsigira kubhadhara neApple Pay | IPhone nhau
eBay ikozvino inotsigira Apple Kubhadhara kubhadhara
Apple Pay inoenderera ichigadzira nzira yayo nhanho nhanho. Pane ino chiitiko, David Becker, mupepeti weAppososophy, akaratidza kuti ichi chakakurumbira portal yekutengesa portal yakagamuchira sevhisi yekubhadhara yaApple. Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve eBay's webhusaiti, kwete muchikumbiro chakabvumidzwa iyi nzira yekubhadhara kwenguva yakareba iyo iOS uye iPadOS kunyorera.
Pasina mubvunzo Apple Pay ndeimwe yenzvimbo dzakachengeteka uye dzinokurumidza kupfuura dzese dzekubhadhara dzatinoziva nezvadzo, inokwikwidza yakanangana nemabhangi echikwereti uye madhibhiti kadhi uye ndezvekuti vashoma vashandisi vashandisi vanoshandisa makadhi zvakanyanya kutenga kwavo, zvimwe ikozvino isu isu inguva dzechirwere uye mari inoda "kusangana zvakanyanya" kupfuura kadhi / mari isingabatirwe. Pamapeji ewebhu vashandisi vazhinji vanoshandisawo makadhi kutenga kwavo uye mune iyi kesi Apple Pay inobatana nePayPal, Visa Mastercard uye American masevhisi masevhisi sekubhadhara masevhisi pawebhu eBay.
Parizvino munyika medu zvinoita kunge isingawanikweZvirinani izvi ndizvo zvatinoona patakaedza kutenga zvimwe zvigadzirwa pawebhu eBay, zvinongogamuchira kubhadhara kuburikidza nePaypal, Visa Mastercard kana Google Pay. Zvinotaridza kuti muUnited States yatove kushanda saka haifanire kutora nguva yakareba kuti ipararire kune dzimwe nzvimbo.
Chinhu chakanakisa pane zvese izvi ndechekuti kuwedzera kweApple Pay sevhisi kuri kugara kuri uye pamusoro pese kuchisvika chero kupi. Zvishoma nezvishoma sarudzo dzevashandisi kubhadhara neiyi Apple sevhisi yakakura uye kunyangwe semuenzaniso iyo chaiyo Apple Kadhi haiwanike munyika dzese, sevhisi yekubhadhara kuburikidza neApple Pay kunyangwe iine iyo iPhone, iyo iPad, iyo Apple Watch kana kunyangwe iyo Mac iri chaizvo yakatekeshera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » eBay ikozvino inotsigira Apple Kubhadhara kubhadhara
Apple TV + inovandudza iyo yakateedzana YeVanhu Vose kwemwaka wechina
Kuedza iyo nyowani MagSafe bhatiri ye iPhone 12